हामीलाई किन छनौट गर्नुहोस् - निB्गो जिआंगडONG्ग हाइसन मेकानरी सीओ।, LTD.
घर » हाम्रोबारे » हामीलाई किन छनौट गर्नुहोस्
इंजेक्शन मोल्डिंगले रंगीन पोलीस्टीरिनको मोतीहरू पगालेर काम गर्दछ, प्लास्टिक, वा राल, र त्यसपछि मोल्डमा सामग्री इंजेक्शन गर्दै. प्रक्रिया सामान्यतया आइटम निर्माण गर्न प्रयोग गरीन्छ, प्लास्टिक कप र कटलरी सहित, बाहिरी फर्नीचर, बोतल क्याप्स, कमोडिटी पार्ट्स र अटोमोबाइल पार्टहरू. त्यहाँ चार मुख्य विचारहरू छन् जब एक इन्जेक्शन मोल्डिंग कम्पनी छनौट गर्ने: गुण, प्रतिष्ठा, मूल्य, र नेतृत्व समय. तपाइँ सबै चार तत्वहरू सँगै विचार गर्न सक्नुहुन्छ, यो सुनिश्चित गर्न कि तपाईं विक्रेता छनौट गरिरहनु भएको छ जुन तपाईंको आवश्यकताहरू राम्रोसँग मेल खान्छ.
गुण एकदम महत्त्वपूर्ण छ किनकि नराम्रो रूपमा गठन गरिएको टुक्रा मात्र अप्रिय मात्र हुन सक्छ, तर अस्थिर. उत्पादनहरूमा अटोमोटिव पार्ट्समा कमजोरी, फर्नीचर, वा रसायनिक कन्टेनरहरूले चोट र दायित्वको जोखिम बढाउँदछ. एक इंजेक्शन मोल्डिंग कम्पनीले टुक्राहरू उत्पादन गर्नु पर्छ जुन एयर बुलबुले र विदेशी सामग्रीहरूबाट स्वतन्त्र छ. उद्धरणको साथ अघिल्लो प्रोजेक्टहरूको नमूनाहरू सोध्न विचार गर्नुहोस् ताकि तपाईं विक्रेताहरूमा गुणस्तर तुलना गर्न सक्नुहुनेछ.
स्थिर उच्च गुणवत्ता Hysion कम्पनी को पहिलो उद्देश्य हो. हामी "SSSSS प्रयोग गर्दछौं” गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रणाली प्रत्येक भागको गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न, प्रत्येक उत्पादन प्रक्रिया.
एक इन्जेक्शन मोल्डिंग कम्पनीको विगतका ग्राहकहरूसँग पनि राम्रो प्रतिष्ठा हुनुपर्छ, साथै व्यापार समुदाय भित्र. सोध्नु, र जाँच गर्दै, एक कम्पनीको अघिल्लो ग्राहक सन्दर्भ यो नियमित रूप बाट वितरण मितिहरु भेट्छ कि भनेर पत्ता लगाउन राम्रो तरिका हो, गुणस्त उत्पादनहरू उत्पादन गर्दछ, र राम्रो ग्राहक सेवा प्रदान गर्दछ. तपाईं कम्पनीको क्रेडिट-योग्यता निर्धारण गर्न व्यापार क्रेडिट रिपोर्टको लागि पनि सोध्न सक्नुहुन्छ. आपूर्तिकर्ताहरूलाई भुक्तान नगर्ने बानीका साथ सम्भावित विक्रेतासँग गहिरो वित्तीय समस्या हुन सक्छ र तपाइँको लागि सही विक्रेता नहुन सक्छ।.
Hysion कम्पनीको भावना "ग्राहक पहिले,इमानदार पहिले” सिद्धान्त, सहकार्यको दीर्घकालीन सम्बन्ध स्थापित गर्न धेरै उद्यमहरूको साथ. Hysion रूस मा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनहरु निर्यात गरेको छ, उज्बेकिस्तान, थाईल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेशिया, मेक्सिको, कोलम्बिया,ट्युनिसिया, अल्जेरिया, दक्षिण अफ्रिका, आदि.
यथार्थवादी, मूल्य सधैं एक प्रमुख चिन्ता हो. एक प्रतिस्पर्धी बिडिंग प्रक्रिया यो सुनिश्चित गर्नका लागि उत्तम तरिका हो कि तपाइँ तपाइँको उत्पादनको लागि उचित रकम तिर्दै हुनुहुन्छ. सब भन्दा सटीक तुलना प्राप्त गर्न, तपाईंले प्रत्येक विक्रेतालाई उस्तै विशिष्टता प्रदान गर्न आवश्यक छ. तपाईले यो पनि सोध्नु पर्छ कि मोल्डको स्वामित्व कसले राख्छ. यदि तपाईं साँचाहरूको मालिक हुनुहुन्छ भने, तपाइँ मोल्डहरूको लागि फेरि भुक्तानी नगरी तपाइँको अर्को उत्पादन चालनमा निर्माताको स्विच गर्न सक्नुहुन्छ.
Hysion ग्राहकको आवश्यकता अनुसार इंजेक्शन मोल्डिंग मेसिनको डिजाइन र निर्माण गर्न सक्दछ. उच्च लागत प्रदर्शन हाम्रो hysion इंजेक्शन मोल्डिंग मेशिनको मुख्य बिक्री बिन्दु हो.
धेरै ढिलो आइपुगेको उत्पादन उपयोगी नहुन सक्छ, त्यसैले विक्रेता छनौट गर्दा नेतृत्व समय महत्वपूर्ण कारक हुन सक्छ. सामग्रीको उपलब्धता, अवस्थित उत्पादन तालिका, र अनुकूलन रंगको परीक्षणले सबै उत्पादन टाइमलाइनमा योगदान पुर्‍याउँछ. यो सुनिश्चित गर्न उत्तम छ कि तपाईंसँग लिखित समयरेखा छ जसमा तपाईंले पूरा गर्नु पर्ने कार्यहरूको लागि डेट मितिहरू समावेश छन्, जस्तै नमूनाहरू अनुमोदन गर्ने. तपाईं पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि नेतृत्वको कति समय कच्चा मालको लागि पर्खि रहेको छ, र सोध्नुहोस् कि सम्भावित विक्रेता को एक ब्याक अप आपूर्तिकर्ता छ.
पहिले ग्राहकको सिद्धान्तमा आधारित, hysion सँधै मूल वितरण मिति भन्दा अगाडि मेशिनहरू पुर्‍याउँछ.
अन्तमा, तपाईं एक इंजेक्शन मोल्डिंग कम्पनी छनौट गर्न चाहानुहुन्छ जुन लाइनमा राम्रो साथी हुनेछ. यसको मतलव एक कम्पनी छनौट गर्नु हो जुन उत्पादनको उत्कृष्ट ट्र्याक रेकर्ड छ, गुणस्तरको सामान उत्पादन गर्दछ, आर्थिक रूपमा स्थिर छ, र उचित मूल्य निर्धारण र समयमा डेलिभरी प्रस्ताव गर्दछ. प्रारम्भिक विक्रेता छनौट प्रक्रियामा अतिरिक्त समय खर्च गर्दा समय र टाउको दुखाइ पछि बचत हुनेछ.
Hysion हरेक ग्राहकहरु संग एक लामो समय सहयोग सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहान्छ, र उच्च गुणवत्ताको मेशिनहरू आपूर्ति गर्दछ र राम्रो सेवा प्रदान गर्दछ.